'नेपाल'मा प्रकाशित ०७३ का ५ पढ्नैपर्ने लेखहरु - नेपाल आर्काइभ - नेपाल
नत्र हलो जोत्लास् ! कहिलेसम्म ?
लीलामणि पौड्याल, आश्विन ३०, २०७३
अधिक अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई ‘राम्रैसँग पढ्, नत्र हलो जोत्लास्’ भन्छन् । कतिपयले ‘राम्रोसँग नपढे कुल्ली, खलासी बन्लास्’ भन्छन् । एकदमै संवेदनशील उमेर समूहका बालबालिकालाई पटकपटक भनिएका यी र यस्तै वाक्यांशको गहिरो छाप आजीवन बस्छ ।
विवेक पौडेल, आश्विन ९, २०७३
अच्युत वाग्ले, कार्तिक २१, २०७३
हरेक नेपाली भारतीय राष्ट्रपतिका लागि सुरक्षा खतरा हो र उसलाई कसै गरी सडकमा आउन दिनुहुन्न भन्ने सन्देश नेपाल सरकारले नै दियो ।
किन विरोध भयो, टोपी दिवसको ?
श्रेय पौडेल, पुस २६, २०७३
ढाका टोपी र दौरा–सुरुवाल निर्जीव पहिरन हुँदाहुँदै पनि तिनमा शासकको सांस्कृतिक आत्मालाई घुसाइयो ।
एल्डर ब्रदर सिन्ड्रम
हस्त गुरुङ, माघ १७, २०७३
हाम्रा बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी र नागरिकहरूको मन–मस्तिष्कमा ‘एल्डर ब्रदर इज वाचिङ यू’ भन्ने त्रास छ । त्यही भएर आफूले चाहेको काम गर्न र मनमा लागेका बोली बोल्न नेपालीले हिम्मत देखाउन सकेका छैनन् ।